Kalenda anyanwụ: gịnị ka ọ bụ, njirimara na mmalite | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 23/11/2021 16:00 | Ciencia
Anyị niile na-eji na-eso nke kalenda anyanwụ ma ọ bụghị ọtụtụ ndị maara ebe o si ma ọ bụ ihe ọ pụtara. Na mgbakwunye na ịbụ kalenda nke anyị nwere ike ịhụ ụdị dị iche iche n'ime ya, o doro anya na ọ dị iche na kalenda ọnwa. O nwere ụfọdụ njirimara pụrụ iche na ha kwesịrị ịkọwa ebe a.
Ya mere, anyị ga-enyefe akụkọ a iji gwa gị ihe kalenda anyanwụ bụ, ihe mmalite ya na njirimara ya niile.
1 Gịnị bụ kalenda anyanwụ
2 Ụdị kalenda anyanwụ
2.1 Kalenda anyanwụ nke okpomọkụ
2.2 Sidereal anyanwụ kalenda
3 Ọdịiche dị na kalenda ọnwa
Gịnị bụ kalenda anyanwụ
Kalenda anyanwụ bụ kalenda na-achị ndụ anyị. Ọ bụ usoro mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na-adabere na afọ oge nke ihe dịka 365 1/4 ụbọchị, nke bụ oge ọ na-ewe ka ụwa na-aga gburugburu anyanwụ.
Ndị Ijipt yiri ka ha bụ ndị mbụ mepụtara kalenda anyanwụ. Mpụtaghachi nke nkịta-Sirius (Sothis) na mbara igwe ọwụwa anyanwụ bụ ebe a na-edobe anya kwa afọ, na-adaba na iju mmiri nke Naịl kwa afọ, ha mere kalenda maka ụbọchị 365. Ọ na-enwe ọnwa 12, ụbọchị 30 kwa ọnwa, na ụbọchị 5 agbakwunyere na njedebe nke afọ, na-eme ka kalenda ya jiri nwayọọ nwayọọ na-agahie.
Ptolemy nke Atọ Euergetes nke Ijipt gbakwunyere otu ụbọchị na kalenda nke ụbọchị 365 bụ isi kwa afọ anọ n'ime iwu Canopus (237 BC) (a na-ewebatakwa omume a na kalenda Seleucid nke a nabatara na 312 BC).
Na Roman Republic, Emperor Caesar na 45 BC. Dochiri kalenda ndị Rome chaotic Republic site na kalenda Julian, nke nwere ike dabere na kalenda ọnwa Greek. Kalenda Julian na-ekenye ụbọchị 30 ma ọ bụ ụbọchị 31 ruo ọnwa 11 ruo February; a na-anabata afọ itule kwa afọ anọ. Otú ọ dị, mgbe e mesịrị, kalenda Julian mere ka afọ anyanwụ dị ogologo site n'ịgbakwunye otu ụzọ n'ụzọ anọ nke ụbọchị n'afọ; afọ nke anyanwụ bụ ụbọchị 365.2422.
Ka ọ na-erule n'etiti narị afọ nke 10, oge nfefe akpatala ọtụtụ njehie nke ihe dị ka ụbọchị iri. Iji mezie njehie a, Pope Gregory XIII chepụtara kalenda Gregorian na 1582, site na Ọktoba 5 ruo 14 nke afọ ahụ, wee hapụ afọ ịwụli elu n'ihi na ha dị otu narị afọ nke enweghị ike ikewa ya na 400, dịka ọmụmaatụ, 1700, 1800 na 1900. Site na nkọwa niile, anyị na-ahụ na ụdị kalenda anyanwụ dị iche iche apụtala, nke ejirikwa akara akara. Kalenda Gregorian anyị ugbu a bụ kalenda Gregorian, mana ọ gaghị ewute anyị ma anyị mara ihe kalenda Gregorian ndị ọzọ bụ.
Ụdị kalenda anyanwụ
Kalenda anyanwụ nke okpomọkụ
Kalenda okpomọkụ nke anyanwụ bụ kalenda nke afọ okpomọkụ na-achị, oge ya dịkwa ihe dịka ụbọchị 365, awa 5, nkeji 48, na sekọnd 45 (ụbọchị 365,24219). Afọ okpomọkụ nwere ike ịbụ site na mmiri ma ọ bụ ụbịa equinox ruo na-esote, ma ọ bụ site n'oge okpomọkụ ma ọ bụ oyi solstice ruo na-esote.
Ọ bụ ezie na kalenda Gregorian nke taa nwere ụbọchị 365 n'ime otu afọ, anyị na-agbakwunye ụbọchị ịwụli elu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ anọ ọ bụla iji na-aga n'ihu na afọ okpomọkụ. Enweghị ọnụ ọgụgụ ziri ezi nke afọ ịwụli elu, kalenda anyị ga-apụ ngwa ngwa na mmekọrịta. Nke a na-eme na kalenda Julian nwere ọtụtụ afọ ọwụli. N'ikpeazụ, e ji kalenda Gregorian dochie ya.
Ndị a bụ kalenda anyanwụ nke okpomọkụ:
kalenda ndị Copt
Kalịnda ndị Iran (Jal_li Kalinda)
Kalenda anyanwụ Thai
Nke ọ bụla n'ime kalenda ndị a nwere afọ 365 ma na-agbasawanye mgbe ụfọdụ site n'ịgbakwụnye ụbọchị agbakwunyere iji mepụta afọ ọwụli elu. A na-akpọ usoro a "nchịkọta", ebe ụbọchị etinyere na-abụ "ntụgharị". Ọzọkwa, e nwere kalenda Zoroastrian, nke ọ bụ kalenda okpukperechi maka ndị na-efe Zoroaster ma bụrụ ihe dị ka kalenda okpomọkụ nke anyanwụ.
Sidereal anyanwụ kalenda
Kalenda Bengali bụ ihe atụ kacha mma na kalenda anyanwụ. Nke a na-abụkarị ụbọchị 365, gbakwunyere otu ụbọchị iji mepụta afọ ọwụli elu. Achọpụtara ọnwa iri na abụọ nke anyanwụ dị ka otu n'ime oge isii (ọnwa abụọ n'oge ọ bụla). Ọnwa ọ bụla na-anọchi anya otu ìgwè kpakpando.
Typedị kalenda A na-eji ha eme mgbaasị ma nwee ihe dị mkpa n’okpukpe dị iche iche. Kalịnda a nwekwara ike iji ọnwa ọnwa. N'ihi ya, a na-akpọ kalenda Bengali kalịnda ọnwa na anyanwụ.
Ndị a bụ kalenda anyanwụ sidereal:
Ọdịiche dị na kalenda ọnwa
Anyị ahụla ka kalenda anyanwụ si dabere na mmegharị nke anyanwụ na ndị mmadụ maara nke ọma karị. Ma ọ bụghị naanị kalenda, ọ bụ ezie na anyị ga-ekwukwa banyere kalenda ọnwa, nke a na-achịkwa usoro ọnwa dị iche iche. N'ụzọ dị otú a, kalenda anyanwụ dị nnọọ iche na kalenda ọnwa, bụ́ nke na-eji ọnwa gbakọọ ọnwa. Ọ bụ ezie na kalenda abụọ ahụ na-eji ụzọ dịgasị iche iche tụọ ọnwa, ha abụọ nwere ike inyere anyị aka ịmata oge nke ọma na ijikwa ndụ anyị.
N'aka nke ọzọ, ọdịiche pụtara ìhè n'etiti kalenda ọnwa na kalenda anyanwụ bụ ihe ndị dị n'eluigwe nke a na-eji tụọ oge gafere. Kalenda ọnwa na-eji akụkụ nke ọnwa tụọ oge. N'ozuzu, otu ọnwa bụ oge n'etiti ọnwa ọhụrụ na ọnwa ọhụrụ. Oge a chọrọ ka ụwa gbaa anyanwụ gburugburu bụ otu afọ nke anyanwụ.
Kalenda anyanwụ na-atụkarị oge n'etiti vernal equinoxes. N'ihi na ọnwa na-ewe otu oge iji na-agbagharị gburugburu ụwa, ọnwa na-egosipụta otu ihu mgbe niile n'ụwa. Ọ bụ ya mere a na-ahụbeghị oke ya ọzọ. Ọnwa ọhụrụ na-apụta kwa ụbọchị 29,5 ọ bụla. Ndị na-enyocha mbara igwe na-akpọ oge n'etiti ọnwa ọhụrụ ọnwa synodic.
Kalenda ọnwa niile nke ndị mmadụ na-eme dabere na ọnwa synodic, ọ bụghị ọnwa ndị anyị nwere ike ịhụ na kalenda anyanwụ. N'ezie, e guzobela kalenda anyanwụ dị ka ọnwa anyị na-ejikarị eme ihe mgbe niile, n'adịghị ka kalenda ọnwa, nke A na-ejikarị ya eme ihe maka ihe ọkụkụ na ihe ndị esoteric.
Dịka ị na-ahụ, enwere ọtụtụ ọdịiche dị n'etiti kalenda ọnwa na anyanwụ. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere kalenda anyanwụ, àgwà ya na mmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Kalenda anyanwụ